Iyadi engasemva - kufutshane ne-Prom nesiqithi - I-Airbnb
Iyadi engasemva - kufutshane ne-Prom nesiqithi
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguIris
Indlu enevaranda entle elungisiweyo enendawo yayo yokungena. Isiqingatha seyure ukusuka ePhillip Island, iyure enye enesiqingatha ukusuka ePromontory, kwimizuzu eyi- ukusuka kumalwandle aseCape Paterson naseInverloch kwaye yimizuzu eyi-15 kuphela ukusuka kwisibhedlele saseWonthaggi!! Imizuzu eyi- ukusuka kwiinduli zaseSouth Gippsland. Indawo esembindini entle yokubuka iilwandle neenduli zeBass Coast neSouth Gippsland. Ungahamba-hamba ukuze ujonge i-State Coal Mine - imbali kaVictoria. Umgama wokuhamba ukuya kwiindawo zokuthenga zedolophu!
Iyadi yabucala, enkulu ngasemva enemifuno emininzi (kuxhomekeke kwixesha lonyaka). Zivumelekile kwaye izinja zivumelekile - ndiza kuhamba ne-pup yakho, ukuba uyazishiya imini yonke, xa ndihamba nentombazana yam.
4.95 · Izimvo eziyi-78
Sikwisitrato esipholileyo sokuhlala malunga nemizuzu eyi-6 sihamba ngeenyawo ukusuka ezivenkileni, esibhedlele kunye neeklabhu. Kufuphi ne-parkland kunye nendlela ephambili eya eKapa Paterson.
Ukonwabele ukuncokola uze ucebise ngeendawo onokutyelela kuzo - zininzi iindawo ezintle onokuya kuzo emini apha. Ukusuka kwizibane ezikhanyayo zePhillip Island ukuya kuxolo lweTara Bulga National Park.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wonthaggi